Tafadzwa Mugwadi Archives – Nehanda Radio
Apr 22, 2022 57,764
Feb 9, 2022 26,803
The ruling Zanu PF party has dismissed reports circulating on social media that it has fired Information Director, Tafadzwa Mugwadi. Zanu PF spokesperson, Chris Mutsvangwa, also dismissed the reports saying “it’s a false-flag operation.”
Nov 10, 2021 37,057
Zanu PF supporters have reprimanded the ruling party's Director of Information Tafadzwa Mugwadi over "toxic and insensitive" statements he issued against former cabinet Minister Jonathan Moyo.
Jan 12, 2021 42,134
Jan 12, 2021 68,817
Jan 11, 2021 38,482
President Cyril Ramaphosa has invited Zimbabwe's Zanu-PF director of information Tafadzwa Mugwadi to reveal his threatened "bombshell" regarding a recent visit by an ANC delegation to Zimbabwe.
Nov 18, 2020 13,730
The Judicial Service Commission (JSC) has initiated disciplinary measures against Harare Civil Magistrates Court Milton Serima for unconstitutionally standing for election in the Zanu PF District Coordinating Committee (DCC) in Mt Darwin.
Sep 16, 2020 49,661
Zanu PF has warned South Africa's ruling African National Congress (ANC) against coming back to Zimbabwe to engage with rights organisations and opposition parties over gross human rights violations orchestrated by President Emmerson…
Aug 21, 2020 37,784
May 16, 2022 5,516
May 16, 2022 71,106